Football Khabar » बार्सिलोना ग्रीजम्यान भित्र्याउने नजिक, कति तिर्दैछ ?
बार्सिलोना ग्रीजम्यान भित्र्याउने नजिक, कति तिर्दैछ ?
स्पेनिस बार्सिलोना फ्रेन्च फरवार्ड एन्टोनी ग्रीजम्यान भित्र्याउने धेरै नजिक पुगेको रिपोर्ट बाहिरिएको छ । गत सिजनबाटै स्टार फरवार्ड भित्र्याउन लागिपरेको बार्सिलोना लामो चर्चा र रस्साकस्सीपछि ग्रीजम्यान भित्र्याउने नजिक पुगेको हो ।
अन्तर्राष्ट्रिय मिडिया ‘टेलिग्राफ’का अनुसार बार्सिलोनाले आगामी सोमबारसम्ममा ग्रीजम्यान अुबन्धको घोषणा गर्ने सम्भावना छ । खबरअनुसार बार्सिलोनाले २८ वर्षीय ग्रीजम्यानका लागि १२० मिलियन युरो खर्चिने तयारी गरेको छ ।
ग्रीजम्यानले सिजन २०१८÷१९ सकिनुअघि नै क्लब एथ्लेटिको मड्रिड छाड्ने घोषणा गरेका थिए । त्यसपछि उनी लगातार बार्सिलोना सर्ने चर्चामा जोडिँदै आए पनि दुवै पक्षबीच ठोस प्रगति भने हुन सकेको थिएन ।
तर, सरुवा बजार सकिन लागेसँगै दुई पक्ष समझदारीमा पुगेको बताइन्छ । यता, बार्सिलोनाले पूर्वखेलाडी ब्राजिलियन नेइमारसमेत भित्र्याउने प्रारम्भिक सहमति बनिसकेको खबर आइरहेका छन् ।
प्रकाशित मिति १० असार २०७६, मंगलवार १५:४७